Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Oceania Mile Jedinak Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ihe Na-adịghị Agbanwe
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; “Ntutu Aka nke A Ga-atụ Egwu”. Anyị Mile Jedinak Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Mile Jedinak's Bio gụnyere Akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye (Natalie Peacock), Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Ee, onye ọ bụla maara banyere njirimara Onye ndu ya mana ole na ole na-atụle mbipute Mile Jedinak's Life nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka amalite.
Mile Jedinak Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Aha ezigbo ya bụ Michael John Jedinak. A mụrụ ya na Ụbọchị 3 nke August 1984 na Sydney, Australia. Michael bụ nke Croatian na aha ya 'Mile' bụ otu n'ime aha nickname ahụ nke nwere ụdị ịghọ aha aha ya.
Mile tolitere dị ka nwatakịrị na ógbè ndị dịpụrụ adịpụ nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke Rooty Hill, Sydney na nne na nna ya na nne na nna ya ochie, ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị.
N'ezie, ọ bụrụ na ị ghọta mpaghara ahụ, ndị bi na ala, oge ndị siri ike ha gabigara, mgbe ahụ ị ga-enweta ezigbo nghọta banyere otu Mile Jedinak si mepụta ikike iche echiche na mkpebi siri ike ịga n'ihu ma nwee ọganiihu na otu n'ime soccer kasị ukwuu nkebi.
Jedinak chetara otu ugboro. "Ndị nne na nna m ochie nọkwa n'ógbè ahụ ka anyị wee nwee nnukwu netwọk ezinụlọ. Papa m na papa m na-arụsi ọrụ ike. Ma eleghị anya, ọ na-esiri m ike, ma agaghị m ekwu na ọ dị oke njọ. Ihe a bụ, ihe ha nwetara ha rụsiri ọrụ ike inweta.
Ọ naghị adị mfe ma echere m na ọtụtụ nzụlite m dabere na ịrụ ọrụ maka ihe ị ga-enweta. M na-ele anya n'azụ na enwere m ike ịsị na ịnweta àgwà ndị ahụ na-eto eto bụ ihe m na-enwe obi ụtọ ma na-ekele nnọọ ndị mụrụ m maka otú ha si zụlite m. "
Dika nwatakiri, Mile gara St Augustine High School di na Rooty Hill. Na ụlọ akwụkwọ ahụ bụ otu egwuregwu football. Ọ hụrụ egwuregwu ahụ n'anya wee mee ka ọ bụrụ agụụ ya na ọrụ ya n'ọdịnihu site na nwata.
Mgbe Mile nọ n'ụlọ akwụkwọ, ọ sonyere ma duru ndị otu ya ka ha merie n'ọtụtụ asọmpi. Ihe ncheta ya bụ PDSSSC, asọmpi nke ndị ụlọ akwụkwọ Katọlik niile nke Australia lụrụ ọgụ.
Mgbe ntorobịa ya bilitere, Mile weere football gaa n'ọkwa ọzọ site na ịbanye na Sydney United maka ọrụ ntorobịa ya. Ogologo ahụ gara n'ihu ghọrọ ọkacha mmasị klọb ka ọ banyere n'akụkụ ndị okenye ha.
Iji nweta ahụmịhe dị ukwuu, ọ gara Croatia (NK Varaždin), na Turkey (Antalyaspor) na Loan tupu ọ mechara gaa Europe na ebe ọ mechara bụrụ onye isi nke Crystal Palace yana mba ya. Dị nnọọ ka Mark Viduka, onye na-achị obodo ya pụtara ụwa na ya na ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a
Ọnye na-bụ Natalie Peacock? Nwunye Mile Jedinak:
Na 2010, Jedinak lụrụ Natalie Peacock. Ha na-enwe mmekọrịta ruo ogologo oge, ha na ibe ha dị ezigbo mma. A na-ahụkarị di na nwunye a na ihe omume dị iche iche.
Nwunye ya, Natalie Peacock bụ ihe nlereanya mbụ si Sydney. Di na nwunye ahụ nwere nwa nwoke aha ya bụ Andre mgbe ha lụsịrị na 2010.
Ndụ Mile Jedinak nke Onwe:
Mile nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Mile Jedinak: Ọ bụ onye okike, onye nwere obi ụtọ, onye na-emesapụ aka, onye nwere obi ụtọ, obi ụtọ, dị ọchị.
Mile Jedinak adịghị ike: N'oge ụfọdụ, Mile nwere ike ịdị mpako na isi ike.
Ihe Mile Jedinak nwere mmasị: N'ezie, ọ na-enwe mmasị iso ememe ememe ma soro ndị enyi na-ekpori ndụ.
Ihe Mile Jedinak achọghị: A na-eleghara ya anya, na-eche eziokwu siri ike, na a dịghị emeso ya dị ka eze ma ọ bụ onyeisi.
Na nchịkọta, Mile Jedinak bụ onye ndu a mụrụ. Ọ dị oke egwu, ihe okike, njide onwe ya na onye isi.
O nwere ike iru ihe ọ bụla ọ chọrọ n'akụkụ ọ bụla nke ndụ ọ na-etinye onwe ya. Obi abụọ adịghị ya, enwere ike na Mile na "eze nke ọhịa" ya.
Mile Jedinak Ndụ Ezinụlọ:
Michael John sitere na ezinụlọ buru ibu na nke etiti na ọtụtụ ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị. Ọ bụ nne na nna ochie ya bụ ndị si na Croatia kwaga Australia n'oge ahụ Agha Ọwụwa Anyanwụ nke bụ akụkụ nke Agha Worldwa nke Abụọ.
Nne ya na nna ya bụ ndị nketa Croatian bịara Sydney dị ka ụmụaka ma tolite na nne na nna ochie ha bụ ndị na-anaghị asụ Bekee. Dị ka ọtụtụ ndị buru ha ụzọ na mgbe ha nwụsịrị, ha lụrụ onwe ha, zụta ụlọ nke mbụ ha ma hụ ka ezinụlọ ha na-amụba.
Mile sitere na ezinụlọ nwere ụkpụrụ omume. Na azụ nke ọrụ ịkwaga mba ọzọ na ụkpụrụ ezinụlọ, ndị nne na nna Mile Jedinak nyeere aka ịkụnye ụkpụrụ niile dị mma na ụmụ ha, Mile ọkachasị.
Taa, a na-ahụ Miles dị ka onye ketara akụkụ dị mma nke ụkpụrụ ezinụlọ ya nke a hụrụ n'ụzọ ọ na-eduga Socceroos dịka Tim Cahill, Harry Kewell na Lucas Neill mere n'oge gara aga.
Mile Jedinak Eziokwu Akụkọ - Akụkọ Na-akpata Aha Ya:
Mile Jedinak ekpughela na ezigbo aha ya bụ Michael - mana emebiri ya n'ihi nketa okike ndị Krita. Jedinak ghọrọ ọkacha mmasị nke ndị Fans n'oge mbụ ya na Aston Villa ma kpọọ ya 'Beard to Bearing' site na Villa Park kwesịrị ntụkwasị obi.
A mụrụ onye mba Ọstrelia na Sydney mana o si n'ezinụlọ Croatian. Ọ na-aga site na mkpirikpi aha ya, Mile - akpọ Me Lay.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Mile Jedinak Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 29, 2021
Bọchị agbanwee: Disemba 31, 2020
Bọchị agbanweela: Machị 23, 2021